Home Wararka Galmudug oo cabsi ka qabta Al Sunna & Warmurtiyeed kasoo baxay taliska...
Galmudug oo cabsi ka qabta Al Sunna & Warmurtiyeed kasoo baxay taliska Booliiska Galmudug
Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa waxaa la soo daristay cabsi ay kaga imaanasa dhaqdhaqaaqa ururk Al Sunna Wajameeca. Galmudug ayaa sheegtay in hoggaanka Ahlusunna ay abaabul iyo kicin dagaal oo looga soo horjeedo maamulka Galmudug ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud.
War-saxaafadeed ka soo baxay Taliska Guud ee Booliiska Galmudug ayaa lagu sheegay in Macallin Maxamuud iyo Sheekh Shaakir ay 12-bishan deegaan Huurshe u yimaadeen siyaaro, hase ahaatee markii dambe ku dhawaaqeen dagaal ka dhan ah Galmudug.
Taliska Booliiska Galmudug ayaa ugu baaqay madaxda Ahlusunna in ay joojiyaan abaabulka dagaal ee ay ka wadaan deegaanka Huurshe ee gobolka Galgaduud. Sidoo kale saraakiisha ciidamada ee raacay Ahlusunna ayay ugu baaqeen in ay 24 saac gudahood dib ugu soo laabtaan xeryohooda, ciddii diidana tallaabo laga qaadi doono.